Maxaad ka taqaan dalalka ay adag tahay in gabdhuhu helaan waxbarasho? | Somaliska
Shalay oo ay taariikhdu aheyd 11 oktoobar kuna beegneyd maalinta caalamiga ah ee gabdhaha caalamka, ayaa waxaa hey’adda la yiraahdo One daaha ka rogtay toban dal oo caalamka ku yaala kuwaas oo ay sheegtay ineey gabhdha ku nooli ku adagtahay ineey helaan waxbarasho.
Hey’adan oo ah hey’ad howsheedu tahay soo saarita warbixinada la xirriira xagga horumarka caalamka, ayaa tibaaxday in dalkaasi ay yihiin kuwo ku yaala qaaradda Afrika, islamarkaana dagaallo soo laa laabta, macluul, saboolnimo iyo caafimaad darri ay sababeen in gabdhuhu waxbarashada helin, halka qaarkoodna ay yihiin kuwo waalidkood ka kaalmeeya howsha guriga. Dalalkaan ayaa kala ah:
2 .Jamhuuriyadda Afrikada dhexe
4 . Afgaanistaan
8 .Burkiina Faaso
10 . Itoobiya
Ugu dambeytiina dalka Soomaaliya ayaan warbixintan lugu soo qaadan iyadoo daruufaha kor ku xusan ay yihiin kuwo dalka iyo dadka soomaaliyeed la daala dhacayeen soddonkii sanno ee ugu dambeeyey Qarammadda Midoobeyna waxaa sanadkii tagay ay sheegtay in caalamku u baahan yahay 70 malyan oo macaliiin, marka la gaaro sanadka 2030-ka, si ay taasi u daboosho baahida xagga tacliinta ah, lana fuliyo axdigii heerka caalami ga ahee ee horumarinta waxbarashada.